Vaovao - Torohevitra fanadiovana kapa 1
Torohevitra fanadiovana kapa 1
Slipper Cnitehina Tip 1 ny
Tsy ho ela dia ho mafana ny andro, indrindra any Guangdong amin'io faritra io, nanao akanjo fohy, fampandehanana rivotra misokatra. Maro ny olona hanaisotra ny kapa plastika, saingy maloto be izy ireo rehefa afaka volana maromaro, ary sarotra ny manasa ny loto.
Ny olona vitsivitsy izay tsy mitandrina dia afaka manadio slipper tsotra fotsiny manao mivantana, fa misy fiantraikany tsara tarehy tsy izany ihany, ary mety hitondra aretina amin'ny beriberi. Anio aho dia te hizara tetika kely hanamora ny fanadiovana ny kapaoty.
Voalohany dia manomana koveta isika, asiana rano mafana, ary avy eo dia manindry ny ampahany amin'ny toothpaste. Avy eo dia asiana vinaingitra fotsy ary afangaro tsara. Atsipazo ao anaty ranom-panasan-damba. Avy eo dia azo atsoboka mivantana amin'ny rano mandritra ny 10 minitra ilay kapa.
Ny toothpaste dia misy mpiasan'ny fanadiovana sy abrasive, afaka manala tsara ny loto sarotra esorina, ny vinaingitra fotsy dia misy fiantraikany amin'ny sterilization, afaka mamono ny bakteria amin'ny kapa, manakana ny fanaovana kapa amin'ny tongotry ny atleta. Ny fahaiza-manasa ny essence madio mandeha smeary dia tena mahery, mampiasa azy io hanasana slipper, mba hahazoana vokatra madio toy izany koa.
Slippers ao amin`ny dingan`ny asitrika ao amin`ny sosona lalina kokoa ny loto dia ho malefaka, amin`ity indray mitoraka ity amin`ny borosy miborosy ny kiraro indray, dia ho hitanao fa ny kiraro ho toy ny vaovao.
Andraso mandra-pahaloto indray ny kiraro, dia ampiasao ity fomba ity hanadiovana ny kiraro, ary tsy hanao kapa maloto mihitsy ianao.
Raha misy kapa maloto ao an-tranonao, andramo ity fomba tsotra sy mora ity.